जान्हवी कपूर र ईशान खट्टरको फिल्म ‘ धडक’ को प्रर्दशन मिति सार्वजनिक | Jukson
जान्हवी कपूर र ईशान खट्टरको फिल्म ‘ धडक’ को प्रर्दशन मिति सार्वजनिक
पोखरा, ०७ माघ
मराठी भाषाको सुपरहिट चलचित्र सैराटको हिन्दी रिमेक फिल्म ‘धडक’ मा डेब्यू गरिरहेका ईशान खट्टर र जान्हवी कपूरको फस्ट लुक सार्वजनिक भइसकेको छ । यसमा जान्हवी र ईसानको केमेस्ट्री निकै नै रोमान्टिक तरिकाले देखाइएको छ । यस फिल्मका निर्माता करण जोहरले फिल्मको प्रदर्शन मिति पनि सार्वजनिक गरेका छन् । शशांक खेतानको निर्देशन रहेको फिल्म ‘धडक’ यही वर्षको जुलाई २० मा प्रदर्शन हुनेछ ।
ईशान र जान्हवी यस फिल्ममा प्रेमजोडीको रुपमा देखिने छन् । शाहिद कपूरका भाइ ईशान खट्टरको लिड हिरोका रुपमा यो डेब्यू फिल्म हो । उनले यस अघि सन् २००५ मा ‘वाह ! लाईफ हो तो एसी’ फिल्मममा बाल कलाकारको रुपमा अभिनय गरिसकेका छन् । श्रीदेवीकी छोरी जान्हवीका लागि भने अभिनयको दुनियामा यो पहिलो सुरुवात हो ।
अजय बन्दैछन् हकी कोच
‘मिस्टर झोले’को साताव्यापी कमाइ साढे दुई करोड!
ठुलो परिमाण लागु औषध सहित पक्राउ
'लुट्न सके लुट' गीतलाई जस्ताको तस्तै युट्युबमा राख्न लोक तथा दोहरीगीत प्रतिष्ठानको आग्रह